Somalia & Somaliland Waxay U Kala Cad Yihiin Sida Habeenka Iyo Maalinta.,” Michael Rubin
Waa maxay sababaha keena cabsda habeenka aqal galka
Adag hotel The "sumurud", Vityazevo: dib u eegista
Bandhig suugaaneedka Habeenka Minneapolis iyo Soomaalida
Posted by maahirnet 1. Is xushmeeya Isku day in aad is xushmeysaan labadiina lamaanaha ah, hadii aad dooneysid in adiga lagu xushmeeyo marka hore waa in xushmad lagaaga bartaa. Waxaa hubaal ah hadaad lamaanahaagasi xushmad leh aad ula dhaqanto,niyada aad daacad ka noqoto adigana in aad heleysid xushmadmid taa lamid ah.
Hadii qoyskaaga xushmad iyo wanaag lagaaga barto asxaabtaadana xushmadaas iyo wanaagaas ayeykaala baranayaan, sidaad qoyskaaga ku dhaqatid ayaad dadkana ula dhaqmeysaa. Noqo mid daacad iyo dulqaad leh Xili walbo isku day inaad joogteeyso daacadnimo, hana noqon mid wax walbo oo lamaanihiisa sameeyo inuu ogaado rabo, waayo wax walbo waan ogaanayaa hadaad dhahdowax badan ayaa halaabayo.
Isdareensiiya xuriyad Dhageyso lamaanahaaga markuudoonayo inuu wax kuu sheego, haka horgeeyn war kale, xouriyad sii uu kuugu soo gudbiyo waxa qalbigiisa ku jiro, hadii uu xoriyadaas helo wixii qalbiga ku jirayna soo wada baxaan, qofkaasi wuxuu dareemayaa nafis, sidaa awgeed mar weliba isku day inaad xuriyad siiso oo aad dhageysato lamaanahaaga.
Mar waliba faraxsanoow. Mar walba isku day in aad faraxsanaato, lamaanahaga ayey ka caawineysaa inuu kula faraxsanaado, isku day in wejigaaga xili walbo dhoola cadeyn ka muqato iyo kalgacal joogto ah. Hadiyad bixiye noqo Noqo mid xiliyada qaar lamaanihiisa ukeeno hadiyado kedis ah, hana dhayalsan waa arin muhiim ah oo siyaadin kartaqoysky isku xirmaan, keenaysanajaceyl aan dhamaan iyo xiiso joogto ah oo la isu qabo.
Si wadajir ah wax ucuna Qoyska oo had iyo jeer si wadajirah wax ucuno waxey keeneysaa in xili walbo oo wax lacunaa qofkii maqan latabo, waa arin muhiim ah nolosha qoyska wax weyn ku soo kordhin karta hadii wax la wada cuno. Ogow nolosha mar waliba farxad maaha Nolosha waa wax maalin walbo is bedbedalaysa, mar waxa ay kugu soo martaa farxad iyo ado dhaqaalo isku haaysta, marne murug iyo dhaqaalo xumo.
Waxaa loo baahanyahay labada waqtiba in leys garab taagnaado,wuxuu alle keenana lagu qanco. Ogowno nolosha lamaanahaada inaad macan iyo qadhaadh gacantaada uga dhigi kartid, aaysan hanti kuxirneen. Waqti usamey qoyskaaga Qoyskaaga sii waqti oo ha noqonmid waqtigiisa shaqo qaadato, marka uu xaafada yimaadana in uu qabeysto, casheeyo kadib jiif sii aado. Isku day qoyskaaga maalmaha aad shaqada fasax ka tahay inaad waqti usameyso sidajimcaha ama axada maalmaha aad shaqada ka fasaxantahay.
Ka shaqee xalinta khilaafaadka. Ha noqon qillaaaf abuure, noqo mid u taagan ka shaqeynta qilaafaadka soo kala dhex gala qoyskiisa, ma jiro qoys aduunka ku nool oo qilaaf soo kale dhex gelin, laakin qilaafkaas yuusan kusaameyn ee u taagnow kashaqeynta xalinta qilaafaadka qoyska.
Xullo labadiinnu meel aan la garanaynin, si goob kasta oo aad tagtaanba ay idinku cusub tahay mustaqbalkana aad u xusuusnaan doontaan inaad wada garateen; Intaas waxaa sii dheer, fikradda ah inay aadaan meel aysan waligood booqan waxay ka buuxin doonaan khiyaano iyo reynreyn, in ka badan inta ay horeba u lahaan lahaayeen xaqiiqda fudud ee ah inay yihiin bisha Malabka.
Kaydso qolka habeenka ugu horreeya ee arooska: wax kasta oo ay ku kacayso, fikradda ah inaad dareento koolkoolin habeenka ugu horreeya ee ay isla qaadan doonaan waa wax lamaanayaashu weligood iloobi doonin oo ah in la siiyo ahmiyadda ay u qalanto waxa ay ku nool yihiin. U beddel qolka habeenka ugu horreeya iyo haddii ay suurtagal tahay kuwa kale, u rogo gabbaad loogu talagalay dadka jecel.
Buuxi shumacyo udgoon si loo yareeyo culeyska aad soo martay intii lagu gudajiray abaabulka arooskaaga; Weydiiso ubax cusub iyo miro qolka, foox dhig oo waxaad dareentaa jannada qofka aad jeceshahay. Haddii ay suurogal tahay, soo qaado cajalad yar oo cajalad ku duuban ama cayaaryahan si aad u dhageysato muusikada aad ugu jeceshahay inaad ku ciyaarto wakhti kasta: socodka xeebta, casho jaceyl, qolkaaga, iwm. Ha ilaawin inaad ku darto heeso dagan, kuwa ku xasuusinaya waqtiga aad la kulantay iyo dabcan kii aad ku dheeshay maalintii arooska.
Urka iyo heesaha ayaa xusuusin kara qof kasta daqiiqad cayiman. Ha iloobin inaad xirxirato dharkaaga xiisaha leh. Wax walba waxay dhacayaan bisha malabka! Marka ragga iyo dumarkuba waxay soo gashan karaan dhar caadi ah oo sokeeye ah oo ay ku ogyihiin inay soo jiidan karaan lamaanahooda. Abuur waxyaalo laga filan karo waxa soo socda, yacni, wehelkaagu ha adeegsado mala-awaalkiisa isaga oo aan ogeyn waxa laga filan karo habeenkii ka dib marka uu arko sida aad u eg tahay maalintii.
Hayso joornaal. Tan waxaa sii dheer ka caawinta inay xusuusnaadaan goobihii ay booqdeen markii ay sameynayeen albumkooda sawir, waxay noqon kartaa fursad lagu qoro qaar ka mid ah fikradaha wixii ay soo mareen maalintaas.
Waxay noqon doontaa xusuus aan caadi aheyn, gaar ahaan toban ama shan iyo toban sano markay arkaan. Keen shamac qaar si daqiiqad kasta uga dhigto mid gaar ah. Haddii aad go'aansato hal maalin inaadan u bixin casho ama qoob-ka-ciyaarin, qolkaaga ka buuxi shumacyo iyo dheel, ciyaar ciyaar, ama hadal uun. Waad damin kartaa nalalka waxaadna ka daawan kartaa xiddigaha halkaas, wax kastoo ah!
Qorsheyso dabbaaldegga dabka iyo cashada dhinaceeda badda ama bartamaha barxadda laambadda oo aad ku cabsi gelin karto isla markaana maskaxda ka saari kartid wixii aad soo martay illaa heerkaa, ka sheekayso waxa ku saabsan mustaqbalka, oo midba midka kale u sheego sida aad u jeceshahay. Musqusha qolkaaga u badal meel dhab ah: u buuxi tubbada biyo kulul iyo goobooyin, ku hareeree shumacyo isla markaana dhalada khamriga ama shaambada ku ag dhow Wada daawo qorrax dhaca.
Dooro meel kale oo aad ku sameyso oo ha ilaawin inaad sawir ka qaadatid si aad u xasuusato sida maalin kale oo ka mid ah malabkaadi ay ku dhammaatay. Keen qaar ka mid ah waxyaabaha galmada Waxay noqon kartaa wax kasta oo ka mid ah looshanno iyo kareemo yar oo midba midka kale loo adeegsan karo, wax kastoo male ah oo kuu saamaxaya inaad ku darto xirmada. Waa inay tixgeliyaan shakhsiyadda lamaanahooda, maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay abuurista "ciyaar" oo labadoodaba ay jecel yihiin iyo tan kale inaan lagu qasbin inay sidaas sameeyaan.
Qorsheyso habeen duugista. Abuur jawi gaar ah si labadiinuba aad u raaxaysataan una raaxaysataan. Iyo ugu dambeyn, ha ilaawin daqiiqad kasta inaad lamaanahaaga xasuusiso sida aad u jeceshahay. In kasta oo aad u badan tahay inaad horeyba u ogayd, maxaa ka fiican inaad u sheegto iyaga oo jooga meel qurux badan oo ka fog wax kasta. Uma maleynayo in qofna dan ka lahayn inuu maqlo marar badan, gaar ahaan bisha Malabka. Nuxurka maqaalka wuxuu u hogaansamayaa mabaadi'deena anshaxa tifaftirka.
Si aad u soo sheegto khalad guji Halkan. Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » 12 fikradaha jacaylka ah ee loogu talagalay bisha malabka Faallo, ka tag taada.
Waxay noqon doontaa xusuus aan caadi aheyn, gaar ahaan toban ama shan iyo toban sano markay arkaan.
Keen shamac qaar si daqiiqad kasta uga dhigto mid gaar ah. Haddii aad go'aansato hal maalin inaadan u bixin casho ama qoob-ka-ciyaarin, qolkaaga ka buuxi shumacyo iyo dheel, ciyaar ciyaar, ama hadal uun.
Waad damin kartaa nalalka waxaadna ka daawan kartaa xiddigaha halkaas, wax kastoo ah! Qorsheyso dabbaaldegga dabka iyo cashada dhinaceeda badda ama bartamaha barxadda laambadda oo aad ku cabsi gelin karto isla markaana maskaxda ka saari kartid wixii aad soo martay illaa heerkaa, ka sheekayso waxa ku saabsan mustaqbalka, oo midba midka kale u sheego sida aad u jeceshahay.
Musqusha qolkaaga u badal meel dhab ah: u buuxi tubbada biyo kulul iyo goobooyin, ku hareeree shumacyo isla markaana dhalada khamriga ama shaambada ku ag dhow Wada daawo qorrax dhaca. Dooro meel kale oo aad ku sameyso oo ha ilaawin inaad sawir ka qaadatid si aad u xasuusato sida maalin kale oo ka mid ah malabkaadi ay ku dhammaatay. Keen qaar ka mid ah waxyaabaha galmada Waxay noqon kartaa wax kasta oo ka mid ah looshanno iyo kareemo yar oo midba midka kale loo adeegsan karo, wax kastoo male ah oo kuu saamaxaya inaad ku darto xirmada.
Waa inay tixgeliyaan shakhsiyadda lamaanahooda, maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay abuurista "ciyaar" oo labadoodaba ay jecel yihiin iyo tan kale inaan lagu qasbin inay sidaas sameeyaan.
Qorsheyso habeen duugista. Abuur jawi gaar ah si labadiinuba aad u raaxaysataan una raaxaysataan. Iyo ugu dambeyn, ha ilaawin daqiiqad kasta inaad lamaanahaaga xasuusiso sida aad u jeceshahay. In kasta oo aad u badan tahay inaad horeyba u ogayd, maxaa ka fiican inaad u sheegto iyaga oo jooga meel qurux badan oo ka fog wax kasta.
Uma maleynayo in qofna dan ka lahayn inuu maqlo marar badan, gaar ahaan bisha Malabka. Waxaad ma aan tegi karo khalad ah haddii aad doorato hotel "sumurud" a Vityazevo. Xaruntu waxay madadaalada "sumurud" Vityazevo : dib u eegista waxyaalaha wanaagsan oo dhan Inkastoo, waxaa had iyo jeer waxay noqon doontaa qaar ka mid ah dhibcood negative in qaribi kara aragti ah ee hay'adda.
Waxaan jirin marka laga reebo iyo hotel ku "sumurud" Vityazevo. Guud ahaan, dadka safarka ah waxaa la bixiyaa xaaladaha wanaagsan loogu talagalay inteeda kale.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira nafaqo diyaar u guests, taas oo muhiim ah. Hoteelka ayaa waxaa ku habboonayn dadka waaweyn iyo hawlaha carruurta. Si kastaba ha ahaatee, in cadar kasta waxay leedahay Daqsi in marisay. Dhibaatada ugu weyn ee hotel this - waa koronto joogto ah oo koronto ah.
Taas darteed, biyaha la joojiyo, joojin wiishashka iyo wareejiyay saacadaha shaqada ee makhaayadda. Waxaa jira qaar ka mid ah dhibaatooyinka la eego ammaanka dhibaatada ugu weyn - waa dabaqa meel simbiriirixo leh. Iyo, dabcan, jeclaan lahaa in fiiro dheeraad ah si ay martida.
Posted in Habeenka malabka
thoughts on “Habeenka malabka”